Gịnị Bụ iPhone Update, otú imelite iPhone na / enweghị iTunes
iPhone iOS update pụtara, imelite ugbu a sistemụ version gị iPhone. E nwere ihe abụọ ụzọ imelite iOS gị iPhone. Otu bụ Via Wi-Fi, nke ọzọ bụ iji iTunes.
Ọ bụ ezie na, ị pụrụ iji mobile njikọ data (3G / 4G) imelite iPhone iOS ma ọ ga-erepịakwa a otutu data n'ihi mmelite arọ na iri oge dị ukwuu ibudata ma wụnye. Ya mere, ọ na-atụ aro na ọ na-mere site na Wi-Fi. Ugbu a, ndị ọhụrụ iOS update dị bụ iOS 9.0.
Ezie na iOS version nwere ike emelitere mfe, na ngwa ọdịnala na gị iPhone nwekwara dị mkpa ka a na-emelite ugboro ugboro. Ọzọ, nke a nwere ike mere ma site na iji a Wi-Fi netwọk ma ọ bụ site ejikọta iTunes na kọmputa gị.
Part 1. Olee iPhones nwere ike imelite ka iOS 5, iOS6 ma ọ bụ iOS 7 Part 2: Update iPhone enweghị iTunes - Jiri WiFi Part 3: Update iPhone na iTunes Part 4: Update iPhone site na iji IPSW Downloader Part 5: Update iPhone égwu
Part 1: Kedu iPhones nwere ike imelite ka iOS 5, iOS6 ma ọ bụ iOS 7
Tupu emelite gị iPhone ka ọhụrụ iOS version i kwesịrị iburu n'uche na ngwaọrụ gị kwesịrị akwado ọhụrụ iOS version.
iOS 5: akwado ngwaọrụ
iOS 5 bụ naanị na-akwado site ọhụrụ ngwaọrụ. Otu iPhone ga-abụ ihe iPhone 3GS ma ọ bụ ọhụrụ. Ọ bụla iPad ga-arụ ọrụ. Otu iPod aka ga-3rd ọgbọ ma ọ bụ ọhụrụ.
iOS 6: akwado ngwaọrụ
iOS 6 bụ naanị na-akwado na iPhone 4S ma ọ bụ ọhụrụ. Ọ bụla iPad ga-arụ ọrụ. Otu iPod aka ga-5th n'ọgbọ. IOS 6 awade mmachi nkwado maka iPhone 3GS / 4.
iOS 7 akwado ngwaọrụ
iOS 7 bụ naanị na-akwado na iPhone 4 ma ọ bụ ọhụrụ. Ọ bụla iPad ga-arụ ọrụ. Otu iPod aka ga-5th n'ọgbọ.
Edi kûfre iOS ị chọrọ kwalite ka, nke mbụ niile, m na-atụ aro na i kwesịrị mee nkwado ndabere tupu emelite iPhone. A ndabere na-egbochi gị adịkwa ọ bụla data bụrụ na ihe na-aga wonky ala akara.
Nkebi nke 2: Update iPhone enweghị iTunes
Nke a bụ n'ezie mfe usoro nke upgrading iPhone si OS, nile nke a choro na olu Wi-Fi njikọ. Otu ihe dị mkpa a ga-edebe n'uche tupu ịmalite bụ na iPhone kwesịrị kpamkpam ebubo. Bụrụ na ọ bụghị, nkwụnye n'ime a Nchaji isi iyi ahụ na mbụ eso ndị a:
Adọ aka ná ntị, Atụmatụ na usoro
1. Jide n'aka na nwụnye usoro na-adịghị etre ma ọ bụ kwụsị abnormally bụrụ na ọ ga-ewetara a nsogbu siri ike.
2. Otu nwere ike iji mgbake mode ma ọ bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi n'oge nwụnye usoro. The DFU mode ike ga-eji ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ njọ.
Nzọụkwụ 1. Gaa n'ụlọ ihuenyo na mgbata Ntọala> General. Gaa Software Update menu, na gị iPhone ga ego ma e nwere onye na update dị.
Nzọụkwụ 2. Ọ bụrụ na onye update dị, ọ ga-depụtara na ihuenyo. Họrọ gị chọrọ update, na enweta na Wụnye Ugbu a nhọrọ ma ọ bụrụ emelite ka iOS 7 ma ọ bụ Download na Wụnye nhọrọ, bụrụ na ị na-emelite ka iOS 6.
Nzọụkwụ 3. Your iPhone ga-arịọ gị ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata mmelite n'elu Wi-Fi, gosi ya na mgbe ahụ, ọ ga-akpali gị jikọọ a odori isi iyi. Mgbe ahụ, mgbata Kwere na-egosi na ala n'aka nri nke ihuenyo. Dị ka nbudata amalite, a-acha anụnụ anụnụ na-enwe ọganihu mmanya ga-apụta. Mgbe nbudata completes, gị iPhone ga-arịọ gị ma ị chọrọ imelite ngwaọrụ ugbu a ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Họrọ Wụnye. Ihuenyo ga-aga nwa na Apple logo na a na-enwe ọganihu mmanya ga-apụta ọzọ. Mgbe nwụnye completes, gị iPhone ga Malitegharịa ekwentị na njikere iji.
Nkebi nke 3: iPhone Update na iTunes
1. Update iPhone OS ka iOS 6
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-emeghe iTunes. A nkwado ndabere na mpaghara syncing usoro ga-amalite na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, na-eme ya aka.
Nzọụkwụ 2. Ka ịmalite update usoro, pịa gị iPhone aha si n'etiti ngwaọrụ depụtara na aka-ekpe-menu.
Nzọụkwụ 3. Gaa Summary> Lelee maka Update> Update. Ọ bụrụ na onye update dị, a ngosi si iTunes ga-apụta. Họrọ Download na Update.
Nzọụkwụ 4. Ọ bụrụ na kpaliri n'ihi ihe ọ bụla ọzọ mkpebi, na-na ịpị Na. Echichi ga-amalite na-akpaghị aka, gị iPhone ga Malitegharịa ekwentị ozugbo ọ na-agwụ agwụ na mgbe ahụ, ị nwere ike iji ya.
2. Update iPhone OS ka iOS 7
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB na-emeghe iTunes. A nkwado ndabere na mpaghara syncing usoro ga-amalite na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, na-eme ya aka.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone site na ngwaọrụ ngalaba na n'aka-ekpe menu.
2. adọ aka ná ntị, Atụmatụ na usoro
Echefula ndabere data na gị iPhone tupu update.
Hichapụ niile ejibeghi ngwa tupu update.
Imelite nile dị na ngwa.
Nkebi nke 4: Melite iPhone site na iji IPSW Downloader
Nzọụkwụ 1. Download IPSW faịlụ na ị chọrọ site ebe a.
Nzọụkwụ 2. Open iTunes. Họrọ gị iPhone si NGWAỌRỤ menu. Na Summary panel jide Option isi na pịa Update bụrụ na-eji a Mac, ma ọ bụ jide Mgbanwe isi na pịa Update bụrụ na-eji a PC
Nzọụkwụ 3. Ugbu a họrọ gị IPSW faịlụ. Agagharị maka download ọnọdụ, họrọ faịlụ, na pịa Họrọ. Ngwaọrụ gị ga imelite dị ka ma ọ bụrụ na faịlụ a ebudatara site iTunes.
App mmepe na-atọhapụ mmelite oge na ọzọ. Ị ga-achọ na-ruo ụbọchị. Ndị na-esonụ akụkụ nke isiokwu na-akọwa otú imelite ngwa ọdịnala na iOS 6 na 7.
Nzọụkwụ 1. Run iTunes-esi na gị iPhone ejikọrọ na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Site n'aka ekpe navigation ebi ndụ, na-aga égwu> Mmelite E Nwere> Download All Free mmelite.
Nzọụkwụ 3. ịrịba ama na Apple ID na-amalite download usoro.
Nzọụkwụ 4. Mgbe downloadng, ị nwere ike mmekọrịta gị iPhone iji nweta ala emelitere ngwa gị iPhone.
Iji aka ịlele maka mmelite site na ịga na iTunes App Store bụ manụ. Na iOS 7, a iwe nwere ike izere site na ime ka gị iPhone na-akpaghị aka na-achọpụtazi na mmelite nke ngwa.
Ndabere iPhone ka Computer na ala
Chọta / Change iPhone ndabere ebe
11 N'ezie,-jụrụ Probs banyere iPhone ndabere
A Ike iPhone Nyefee Software
Bugharịa Music si iPhone ka Computer
Copy Data si iPhone ka Computer
> Resource> iTunes> A Full Nduzi na otú imelite iPhone na / enweghị iTunes